12 Uninzi lweentaba ezintle eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 12 Uninzi lweentaba ezintle eYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/05/2021)
Ukusuka kwi-movie yomntu wonke oyintandokazi yaseYurophu “Iinduli ziyaphithizela sisandi sengoma”. Ewe oku kulandelayo 12 iintaba ziya kwenza ukuba ucule kwaye intliziyo yakho idanise. Ukusuka kwiiAlps kunye neePyrenees ezidumileyo ukuya kwi ubuncwane obufihliweyo weRiphabliki yaseCzech, Sijoyine ngokunyuka siye kwi 12 iintaba ezininzi ezintle eYurophu.
1. Intaba yeMatterhorn eSwitzerland
Ukusuka eGornergat ukuya kwiincopho zeentaba zeRothorn, IMatterhorn inokunconywa naphina eZermatt. I-Matterhorn ikhephu lekhephu kunye nefom yayo engunxantathu, yenza imibono engummangaliso yeentaba.
Ngentwasahlobo okanye ebusika, iMatterhorn eyaziwayo yindawo emangalisayo yeholide ezintabeni. Ungayifumana iMatterhorn kwiiSwiss Alps kwaye ukhethe phakathi ukunyuka phezulu 4,478 mitha, Ukunyuka intaba kwindlela edume kakhulu ukusuka eZermatt ngeHornli Hut.
Ukunyuka kweMatterhorn yenye yezona ndawo zintle kakhulu eYurophu, nzulu kumadlelo aluhlaza aseSwitzerland. ke, uya kuba neendawo ezininzi zokuphunga okumnandi kunye nokubamba umphefumlo wakho ngelixa uncoma ubuhle bendalo.
I-Basel yokuNxibelelana noLoliwe
Geneva ukuya Zermatt Kunye A Isitimela
UBern eZermatt Kunye noLoliwe
ILucerne iya eZermatt Ngoololiwe
2. Jungfrau KwiLauterbrunnen Valley, Swizalend
Kwintlambo entle yaseLauterbrunnen kunye Umhlaba we 72 iingxangxasi, uya kufumana intaba entle yaseJungfrau. at 4,158 mitha, Jungfrau yeyona ntaba iphakamileyo Bernese Alps.
Kwakhona, ungakhetha enyuka okanye onwabele izimvo intaba Jungfrau ukusuka kolona phezulu uloliwe eYurophu. Ukusuka kwicala elinye Mittelland ukuya Vosges, kunye ne-Aletsch glacier kwelinye icala, emangalisa ngokupheleleyo.
3. I-Grossglockner eMpuma iTyrol, Ostriya
Intaba ephezulu yeGrossglockner ijikelezwe 266 iincopho ezincinci kwinto ebizwa ngokuba luphahla lwase-Austria. Olu luhlu lweentaba lwenza enye yeentaba ezintle eYurophu. I-Grossglockner ime inde 3,798 mitha, kunye neGrossvenediger e 3,666 mitha, ukudala enye yeembono ezintle kakhulu zeentaba e-Austria.
Uya kuzifumana ezi 2 iingxilimbela eHohe Tauren Ipaki yelizwe. Apha ungahamba ngeebhayisikile ezintabeni, ukunyuka intaba okanye ukunyuka amatye. Ngale ndlela unokuyithanda imbonakalo entle kuyo nayiphi na i-engile.
IVienna ukuya eLandeck Ischgl Kunye noLoliwe
EMunich ukuya eLandeck Ischgl Kunye noLoliwe
ISalzburg ukuya eLandeck Ischgl Kunye noLoliwe
IZurich ukuya eLandeck Ischgl Kunye noLoliwe
4. Uninzi lweentaba ezintle eYurophu: Dachstein ePhakamileyo Ostriya
Intaba yesibini ephezulu e-Austria yiHoher Dachstein, ibekwe kwidolophu enomtsalane yaseHalstatt. UHoher Dachstein ubonelela ngeyona ntaba intle kunye neembono zamachibi ebusika nasehlotyeni. Ehlotyeni, uya kuyithanda intaba eluhlaza nekarst eluhlaza. ebusika, yiya ukuskiya ukusuka kwincopho yentaba.
kunjalo, ezona ntaba zithandekayo kwiHallstatt kufuneka zibekho 5 Indawo yeminwe yeLake Hallstatt. Ukuba undwendwela ukusuka ngo-Epreli ukuya kuSeptemba, nxiba ubushushu obufudumeleyo bobusika, kuba kusenokubakho ikhephu kwaye kubanda ngeli xesha lonyaka. Unokufikelela kolu luvo lumangalisayo ngemoto yekhebula ngaphandle kokuba ukhetha ukuhamba yonke indlela ukuya kumava anomvuzo nangakumbi.
EMunich ukuya eHallstatt ngoololiwe
Innsbruck ukuya eHallstatt Ngoololiwe
Passau ukuya eHallstatt Ngoololiwe
I-Rosenheim ukuya kwiHallstatt noLoliwe
5. I-Chamonix-Mont-Blanc, Fransi
IChamonix yeyona ntaba iphakamileyo kwiiAlps. nje 15 imizuzu ukusuka kumda, I-Chamonix yindawo emangalisayo ebusika. Apha, uya kubethwa ngumoya kwiimbono ezintle zeMont Blanc.
Unokwenza uloliwe waseMont Blanc, okanye ujonge imibono entle evela kwiivenkile kunye neeresityu kwidolophu yaseChamonix. Ukwengeza, unokunyuka uye eAiguille du Midi okanye eMer du Glace. Nokuba yeyiphi imisebenzi oyikhethayo, Imimangaliso yeentaba ezintle zeentaba zaseFrance ziya kuhamba nawe kuyo yonke indawo.
6. Uninzi lweentaba ezintle eYurophu: IPyrenees
Iipyrenees ezintle zibonelela ngeyona ntaba intle. Iintaba ezisixhenxe ziphakathi eFrance, iVosges, iJura, uMassif Central, Ubunzima beArmorican, kunye neCorsican Massif.
Olu luhlu lweentaba lukhulu kangangokuba kuya kufuneka unyuke usuka kuLwandlekazi lweAtlantic uye kulwandle lweMeditera. Awuzukuya kuphela ekutyeleleni iidolophu zakudala ezinomtsalane, kodwa uya kuba nethuba elingenakuthelekiswa nanto lokuncoma omnye ummangaliso wendalo. Lo mmangaliso kunjalo Ingxangxasi yaseGrande Cascade de Gavarnie okanye iGavarnie. Ngethontsi le 422 mitha, yeyesibini ingxangxasi ephezulu kwelaseYurophu.
ngoko ke, imifanekiso yakho iya kuba yeNational Geographic epheleleyo.
7. Uninzi lweentaba ezintle eYurophu: UVal Thorens eFrance
Phezulu phezulu 2300 Iimitha kwiiAlps zaseFrance, iintaba ezinekhephu iVal Thorens zezona zintaba zintle ebusika. Slayida amathambeka, ukuba nekomityi yekoko eshushu emlilweni, okanye ukonwabele ukujonga kwimoto yekhebula, izinto ezikhangelekayo ziyamangalisa.
kunjalo, ngelixa uninzi lokuya eVal Thorens kuskiya, iyachukumisa kakhulu nangaliphi na elinye ixesha lonyaka. Intlambo yaseTarentaise igcwele izindlu ezinomtsalane, amadlelo, kunye nomlambo i-Isere, ngeentaba zeVal Thorens ngasemva, yenza indawo entle yokuncoma unyaka wonke.
8. IiDolomites E-Itali
Xa unokukhetha kwi 7 amanqaku okujonga, indawo iyamangalisa ngokwenyani kwinkangeleko yomhlaba. Iintaba zeDolomites ziMazantsi e-Itali, lolunye lolondolozo lwendalo oluhle kakhulu eYurophu. Ngaphezu, yenye yezona ndawo zidumileyo zokunyuka intaba kwihlabathi.
Unokukhetha ukuncoma iiDolomites kuhambo losuku ukusuka eBolzano, okanye kwisangqa uhambo lweekhilomitha ezingama-20. Imisebenzi, ipikniki kunye namabala emifanekiso, yaye bentaba, azipheli. Ngaphezulu kwayo yonke, izimvo ziyamangalisa, nanini na kuhambo lwakho.
Kuzo zonke izizathu ezidweliswe apha ngasentla, IiDolomites zezona ndawo zilungele iholide ezintabeni zase-Italiya.
9. Uninzi lweentaba ezintle eYurophu: INtaba iSnowdon eWales
INtaba iSnowdon intle kangangokuba ayothusi ukuba inee-app zayo zokuhamba. ISnowdon ikwiWales, kwaye emva kwe 6-8 ukunyuka iiyure, ungavuya uluvo oluhle lweSnowdonia, I-Anglesey, Pembrokeshire, kunye neIreland.
Ukwengeza, ukusuka kubude be 1085 mitha, uya kuba nakho uku ubone onke amachibi amahle. Umzekelo, Ichibi laseCwellyn kunye neMynydd Mawr zibonelela ngembono omangalisayo ekupheleni kwendlela yeCwellyn.
10. IAdrspach-Teplice KwiRiphabhlikhi yaseCzech
IRiphabhlikhi yaseCzech yaziwa kakhulu ngePrague entle. Bambalwa kakhulu abayaziyo malunga neBohemia kunye nelali eliliwa, IAdrspach-Teplice. IAdrspach ibekwe kufutshane nomda wasePoland kwaye ifanelwe yindawo Imimangaliso yendalo yaseYurophu.
IAdrspach-Teplice yilali eyakhiwe embindini wamatye, ukuphakama ubude, ngelebyrinths, umlambo weorenji, neendlela. Le ndawo inomdla yafunyanwa kuphela 1824. Ukusukela ngoko ibiyindawo ekhethekileyo yabahambi abafuna ukungaqhelekanga.
Apha, ungahamba ngeenyawo, ngesango leGothic kunye neendlela ezifihlakeleyo. Akukho nto ifana nokuncoma ukwakheka kwamatye ngaphakathi kunye nokufikelela echibini eliluhlaza. Kuba uyakuhamba entliziyweni yala matye makhulu, kungcono ukutyelela ehlotyeni, xa iintsuku zinde kwaye kukho ukukhanya okuninzi.
11. Ummandla weMullerthal eLuxembourg
Ngezinye ze iimbono ezintle kakhulu eYurophu, iintaba zeMullerthal eLuxembourg zibonelela ngeendlela ezibukekayo kunye neendawo ezifihlakeleyo eziyimfihlakalo. Njengoko uhamba emahlathini, kudlule amachibi nemithombo, iinduli ezinamatye aluhlaza, uya kufumanisa ukuba ungene kwiintsomi zabantwana.
Ummandla waseMullerthal unemihlaba ekhethekileyo kunye neembono eYurophu. Iinqaba, imiqolomba, imizila, kunye neengcango zamanzi, kukho iimbono ezintle naphi na apho ujonga khona. Ngaloo ndlela, ukunyuka intaba okanye ukuhamba ngebhayisikile, qiniseka ukwenza ubuncinci iintsuku ezimbalwa, Ukuncoma iintaba ezintle zaseMullerthal.
I-Antwerp ukuya eLuxembourg Kunye noLoliwe
IMetz iya eLuxembourg ngoLoliwe
12. Uninzi lweentaba ezintle eYurophu: I-Stanserhorn, Swizalend
Incopho yekhephu, iinduli eziqaqambileyo eziluhlaza, nezindlu ezinomtsalane zasemaphandleni, izimvo ezivela eStanserhorn zezona zinothando. Intaba entle yaseStanserhorn ilungile 20 imizuzu kude neLucern ngololiwe kwaye yenza uhambo oluhle losuku entle Switzerland.
Apha ungathatha imoto yekhebula unyuke uye encotsheni yentaba ngeembono ezimangalisayo zepanoramic yeeAlps zaseSwitzerland kunye namachibi. Enye indlela ebalaseleyo yokuncoma iimbono ezintle zaseStanserhorn kukukhetha i Indawo yepikniki. Ngale ndlela uya kuchitha usuku uphumle kwaye uphefumla ubuhle kunye neeAlps’ umoya opholile.
I-Zurich iya eLucerne ngoololiwe
UBern waya eLucerne ngoLoliwe
Geneva ukuya eLucerne ngoololiwe
UKonstanz ukuya eLucerne ngoLoliwe
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise iholide yakho ukuya 12 iintaba ezininzi ebukekayo eYurophu ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka i-post yethu yeblogi "12 Uninzi lweeNtaba eziBalaseleyo eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fmost-picturesque-mountains-europe%2F‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Iindawo ezikufutshane Uhlobo lentaba Mountains Ukujonga iNtaba Mhle Yintle Umbono obonakalayo
Yintoni Eyona Ncwadi Stores Aseyurophu
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Train Travel The Netherlands, Travel Europe